Qadar oon waxba kasoo qaadin hanjabaadda Sucuudiga | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Qadar oon waxba kasoo qaadin hanjabaadda Sucuudiga
Qadar oon waxba kasoo qaadin hanjabaadda Sucuudiga
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Qadar Maxamed Bin Abirahman Althani ayaa gaashaanka u daruuray hanjabaadda Sucuudiga ee ku aadan hubka difaaca cirka ee la sheegay in Qadar ka iibsaneeyso dalka Ruushka.Hubkaan ayaa ah gantaalaha la wadi karo ee S400 oo dalka Ruushka lagu farsameeyo.
Wasiirka oo ka hadlayay waraaq boqorka Sucuudiga uu u qoray madaxweynaha Faransiiska, taas oo uga dalbaday in cadaadiska lagu kordhiyo dalka Qadar oo uu boqorka walaac ka muujiyay in ay helaan hubkaas difaaca cirka.
Boqorka Sucuudiga ayaa laga soo xigtay in uu waraaqda ku yiri “Qadar oo hesha hubkaas waxay khatar ku tahay danaha amni ee dalka Sucuudi Carabiya, Sucuudiguna waxa uu qaadi doonaa tillaabo kasta oo lagu burburinayo difaacaas, xitaa mid milatari”.
Wasiirka arrimaha dibadda Qadar ayaa sheegay in warqadaas aysan ku saleysneyn wax sharci ah, gadashada hubka ee Qadarna ay tahay mid u taalla waddanka Qadar maadaama ay tahay waddan madaxbannaan.Wuxuu sidoo kale sheegay in hanjabaadda Sucuudiga ay jabineyso sharciga golaha iskaashiga khaliijka, iyo xitaa sharciyadda caalamiga ah.
“Waa ayaan darro in Qadar loo arko mid xasillooni darro ka shaqeyneysa, iyada oo Qadar aysan khatar amni ku aheyn Sucuudiga “ ayuu sii raaciyay wasiirka arrimaha dibadda Qadar.
Waddamada Qadar iyo Sucuudiga ayaan xiriirkoodu wanaagsaneyn tan iyo markii waddamo gacanka khaliija qaar ay cunaqabateyn kusoo rogeen waddanka Qadar.
Previous articleXaaladdii deg dega aheyd oo Itoobiya laga qaaday
Next articleDiyaarad rakaab oo lagu la’yahay dalka Kenya